Ukukhethwa kwesiza ngenxa inthanethi ngakho ayilula kangako. Ngakho-ke, sifunda namuhla, lokho uthola WMRok.com ukubuyekezwa. Phela, le sevisi yakhelwe nomholo ebonakalayo. lapha kuphela uma umbono okusheshe kuphele ukubukwa amaningi, awukwazi iziphetho kwesokudla. Kungani? Le sayithi uthola Izibuyekezo okuxubile. Kudingeka sigxile emaphuzwini amaningi letibalulekile, netimphawu. Nokho, ngemva nje wafunda uzokwazi ukunquma WMRok.com ubuqotho.
Kungenzeka yini ukusebenza
Into yokuqala banake abasebenzisi - kunguwe uhlobo kakhulu umholo. Into wukuthi ngokuvamile-Inthanethi ukunikela izikimu kunalokho okusolisayo umsebenzi. Futhi they dudula eziningi.
WMRok.com - Umholo ukuchofoza. Lo msebenzi, uma ngikhuluma iqiniso, Sekuyisikhathi eside gqizisa ku-intanethi. Yebo, zikhona imikhonyovu namasevisi, kodwa kakhulu yokuthi imisebenzi enjalo, baze bakhokhela, utawentiwa. Ngenxa yalesi service uthola wokubuyekezwa okuvumelekile. Kakade, kukhona ithemba ukuthi empeleni ungakwazi uhola imali le phrojekthi. Ngisho noma akazange esikhulu kakhulu.
Indlela uqale ukuthola? Lwanele baphathe WMRok.com Logon. Futhi emva inzuzo kusuka ukuchofoza imali. Akukho nzima noma ekhethekile. Ukuze ube obambe iqhaza kwi-project, kuyodingeka ibhaliswe.
Okwamanje, abaningi bayangabaza. Ingani kwamanje abanye kudinga inkokhelo sokubhalisa. Ngenhlanhla, WMRok.com asisebenzi izidingongqangi. Nganoma yisiphi isikhathi ungakwazi ngokuphelele khulula lokuba ingxenye isevisi futhi bazakhele lapha. On WMRok.com angakwazi ukubhalisa ngemizuzu embalwa nje. Noma yiluphi ulwazi ebalulekile siqu - idatha yakho njengenhlangano esikhwameni, e-meyili.
Sisebenza ngaphandle kwezinkinga
Sesivele esiphethweni sokuthi ngisho yamaholo ukuchofoza uqobo senzeka. Kodwa lokho ngeke ukwenze? Imaphi amathuba futhi amathemba omsebenzi ezihlinzekwa samanje yethu, iPirates?
WMRok.com - akusiyo nje yamaholo ukuchofoza. Uyoba ukubukela izikhangiso futhi ukhokhelwe yona. Ama-roller, amasayithi kanye namakhasi - yilokho kokudingekile nhla isiphequluli, bese uthatha imali imisebenzi yabo. Akukho nzima, engaqondakali ikakhulukazi. WMRok.com indawo emnyango, sathatha lo msebenzi, baye balandela isixhumanisi, wabukela ukukhangisa / iwebhusayithi ngesikhathi esithile (ngezinye izikhathi, ngokuvamile akukho timer), wasungula umazisi (njengobufakazi bokuthi ungeyena bot), wathola imali. Sekuyisikhathi eside kwaziwa yibo bonke uhlelo ukuthi usenza simethembe. Ngenxa yakho konke lokhu WMRok.com uhola wokubuyekezwa okuvumelekile. Sinezizathu ezizwakalayo zokukholelwa ukuthi phambi kwethu nkohliso kuye. Vele isevisi entsha ekuvumela ukuthi wena ukuba bazuze ukubukwa ukukhangisa.
Kodwa akugcini lapho zonke izinzuzo ukuthi ingatholakala ku- isayithi. Ngokwesibonelo, umsebenzisi ngamunye unethuba ukuthola ibhonasi wakho futhi wenze nenzuzo. WMRok.com inikeza yokudluliselwa nezimo uhlelo, okuzokwenza wengeze ezinye imali ngayinye isivakashi umhlanganyeli omusha.
Futhi lokhu akugcini kochwepheshe. Njengoba umuntu kokubhalisa ku-akhawunti yakho izoqala ukufinyelela iphesenti inzuzo yayo. Umholo yekwentiwa kanye kabusha bese ukuheha abasebenzisi abasha. uhlelo Ukudluliselwa ukuze WMRok.com multi-level, kahle wacabanga. Futhi ungakwazi ukwandisa inzuzo yakho nge izikhathi eziningana ngaphandle kwezinkinga. Yiqiniso, konke lokhu impendulo WMRok.com kusukela abasebenzi bayo abangahle futhi langempela uthola omuhle.
By endleleni, umsebenzi kuqedile. Futhi ukuchofoza, njengoba umkhuba imibukiso, kudingeka njalo. Lokhu kusho ukuthi awukwazi wesabe mncintiswano kanye ukungabikho inzuzo inkonzo. imali Okungenani izingxenye ezithile ungathola. Kungaba kuhle?
Kuze kube manje kunzima ukuqonda. Kodwa uma ukubhekisisa kahle esemthethweni ikhasi project, ke akubangi izinsolo oluthile yokuthi lena isehlukaniso njalo noma "umkhonyovu."
Ngomqondo onabile, inkulumo ikhasi senziwa Minimalism. Singasho sithi "Ukunqamulela -. Udadewabo ithalente" Futhi lo mthetho siyasebenza ukuze WMRok.com inkonzo. Zonke izinzuzo iqhaza ohlelweni, ungafunda emasimini ezimbili ezincane ekhasini eliyinhloko - ngokuhlukile umsebenzi ngokwehlukene ikhasimende.
Noma yimuphi izibuyekezo eziningi ezinhle, asikho ngokweqile wokudumisa, kanye nokukhangisa futhi ubufakazi ukusebenza wokubambisana. Kodwa, njengoba kwaphawula u-abasebenzisi eziningi, lapha ungathola lonke ulwazi oludingayo wena mayelana nomsebenzi ohlelweni. Lena okusileleyo amaphrojekthi amaningi! Lokhu kunikeza i-positive uhlamvu WMRok.com ukubuyekezwa.
Nokho, akukhona konke kuhlale nice kangaka futhi egqamile. Abanye "lezimanga" Uhlelo namanje enikeziwe kubasebenzisi. Futhi bona baphoqelelwe ukucabanga mayelana ubuqotho iphrojekthi. Kuyini lokhu?
Ngokwesibonelo, abaningi banesithakazelo, kungani ngeke ungene ukuchofoza WMRok.com. Okungukuthi, uma uthanda ukusebenza futhi bafeze imisebenzi yabo, futhi imali icala. Ngokuvamile, lokhu kungabonakala lapho esondela kungenzeka kwezimpawu (embundwini ruble 15). Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa e iningi abahlanganyeli senzeka. Ukuphatha abakwazi ukunikeza impendulo ecacile yalo uhlobo lokuziphatha.
Futhi uzinake ukuthi abasebenzisi abaningi uma sifinyelela ubuncane ekuphetheni umane ivaliwe. Okuningi ngokunembile, uhlelo ngesizathu esisodwa noma kwenye iqala lokuvala abahlanganyeli. Administration Umcabango - wena kabi isevisi. Kodwa eqinisweni, akukho emthethweni futhi sinqatshiwe ungenzi, eqinisweni, nayo yonke imibandela yomsebenzi ngokwezinjongo ezinhle. Konke lokhu odlulela kude abasebenza ibhokisi iphephabhuku. Ngakho ungamangali uma WMRok.com Izibuyekezo angahlangabezani okuqukethwe best. Phela, eqinisweni sisuke ukukhohlisa!
Inkinga ebaluleke kakhulu ekhathaza bonke abangaba ababambiqhaza - is abahola ku isevisi ethile. Ngalo mqondo WMRok.com hhayi okuningi ukuhluka 'abafowabo' abengeziwe. Ezintabeni wegolide ungenalo athembisa, kodwa inzuzo enhle - kalula. On ukuchofoza isilinganiso ngenyanga ungathola ruble ecishe ibe yizinkulungwane 2-3. Lokhu kuhle. Hhayi ngempela lemali ukuthi abaningi balindele, kodwa kungcono kunokuba lutho nhlobo.
Ungathokozi zinkulu. WMRok.com libuyekeza mayelana Ukuhoxiswa imali uhlelo angawutholi engcono. inkinga wukuthi wena ukufinyelela amasevisi okuhumusha ku-esikhwameni elekthronikhi. Lutho osolisayo ngalokho. Kodwa kubalulekile ukuba athole 'ubuncane', ukubeka umyalelo, uke wadunyazwa. Phela, imali wena umane akuveli. Empeleni, ngisho emva kwenyanga.
It kuvela ukuthi WMRok.com engakhokhi. He yodwa ilingisa ngokoqobo Amaholo bese uphuma izimali ayikuvumeli. Zonke izibuyekezo eminingi emihle ka ibhokisi elithi iphephabhuku - iyinkohliso. ukuthenga zabo ekuphathweni iphrojekthi inzuzo ngezithukuthuku abasebenzisi lutho. Phela, umsebenzi ikhasimende kuzokwenziwa ngokugcwele. Kodwa abaculi, uveze amaqiniso njengoba enjalo, is Ayihaba.
Ngakho, WMRok.com - liyinkohliso esinqunyiwe. Ukuze usebenze ke asifanele, kodwa njengendlela inzuzo wokunyusa isayithi - ngokuphelele.
Inkokhelo "WebMoney" uhlelo: kanjani ukuhumushela "WebMoney" esikhwameni ukuze esikhwameni?
Land edolobhaneni noma ubunjalo Ngifuna!
Isiyingi isaha grinders wezandla zakhe
39 Emasontweni onke okukhulelwa. Ukubeka izinto esibhedlela
Indlela ukuqeda amakhambi amaphela abantu ukuba masinya?